တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းသဋ္ဌေးများနှင့် လက်ထပ်ထားသော မင်သမီးများ..(အပိုင်း ၁) | News Bar Myanmar
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းသဋ္ဌေးများနှင့် လက်ထပ်ထားသော မင်သမီးများ..(အပိုင်း ၁)
သဋ္ဌေးသားများ၊ CEO များနှင့် လက်ထပ်နိုင်တာဟာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပင် မဟုတ်တော့ပါ။ အပြင်လောကတွင်လည်း ကြိကြိတတ်ချမ်းသာသော သူများနှင့် လက်ထပ်နိုင်ခဲ့သူများလည်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါလူများထဲတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းမင်းသမီးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သူတို့ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၁%ရှိသော CEO (သို့မဟုတ်) လူချမ်းသာများနှင့် လက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့လက်ထပ်နိုင်ခဲ့သူများထဲမှ အချို ့ကိုတော့ ယခုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။
၁. Jeon Ji Hyun
မင်းသမီး Jeon Ji Hyun ဟာဆိုလျှင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏ သားတစ်ဦးဖြစ်သော Choi Joon Hyuk နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Choi ၏အဘွားဖြစ်သူမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ နာမည်ကြီး ရိုးရာဝတ်စုံ ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်ပါတယ်။ Choi Joon Hyuk မှာလည်း အမေရိကန်ရှိ နာမည်ကြီး ဘဏ်တစ်ခုက်ုိလည်း စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂.Im Yoo Jin
ဘယ်လောက်အထိချမ်းသာလဲဆိုရင်တော့ မင်္ဂလာပွဲကိုတောင် သမ္မတကိုယ်တိုင် တက်ရောက်အားပေးခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့၏ မြို ့တော်ဝန်ကိုယ်တိုင်လည်း မင်းသမီး Im Yoo Jin နှင့် သဋ္ဌေးသား Yoon Tae Young တို့၏ ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ Yoon Tae Young ၏ အဖေဟာ Samsung Electronics ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
၃.Hwang Jung Eum
She was pretty ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Park Seo Joonနှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူမဟာ Lee Young Don ဆိုသည့် စတီးထုတ်လုပ်ရေး ကုမဏ္ဏီ၏ CEO နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမတို့၏ မင်္ဂလာပွဲဟာ ခမ်းနားကြီးကျယ်ခဲ့ပီး Park Seo Joon, Ji Sung, Min Han Groo, Oh Yoon Ah စသည့် နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များစွာ တက်ခဲ့ပါတယ်။
၄.Kim Hee Ae
The world of the married ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော မင်းသမီး Kim Hee Ae ဟာဆိုလျှင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ Bill Gates လို့ပဲတင်စားထားသော Lee Chan Jin နှင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Lee Chan Jin ဟာ HANCOM ( Microsoft of Korea) ၏ CEO ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ Software ကိုတော့ တာင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ယနေ့အထိတွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. Shim Eun Ha
မင်းသမီး Shim Eum Ha ဟာ Ji Sang Wook ဆိုသည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ Hansung group သဋ္ဌေးကြီး၏ သားနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။ Ji Sang Wook ဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပီး မိဘထံမှ အမွေများ သန်းချီရမည့်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Shim Eum Ha ဟာလက်ထပ်ပီးနောက်ပိုငိးတွင်တော့ အနုပညာလောကမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ကြိကြိတက်ချမ်းသော ထိပ်တန်းသဋ္ဌေးများနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သော မင်းသမီးများ ( အပိုင်း ၂) ကိုတော့ ဆက်လက်၍ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတာကတော့ စောင့်မျှော် အားပေးပါဦးနော်။
Next ၅၆ကြိမ်မြောက် Baeksang Arts Awards အကြီးဆုံးဆုဖြစ်သော Grand prize အပါဝင် အခြားနာမည်ကြီး ဆု ၃ ခုကိုပါ When The Camellia Blooms ဇာတ်လမ်းတွဲမှ သိမ်းပိုက်သွား »
Previous « K Drama တွေထဲမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စုံတွဲအမျိုးအစားများ